Daawo Qeybtii 3aad Ee Qisada Xaqiiqada Ah Ee Xasan Xanafi Oo La Kashifay (VIDEO+WARBIXIN). – Bogga Calamada.com
March 31, 2016 6:06 pm Views: 64
Inkastoo dadka Soomaalida ah ay aad uga argagaxaan xittaa iney maqlaan falka “Liwaadh” ama “Ragga oo loo tago” hadane waa dhacdooyin murugo leh oo dhexdeena ay ka geystaan sirdoonada ajaanibta ah iyo kuwa la shaqeeya ee isugu yeera NISA.
Video Cusub oo mar kale uu ka hadlayo Xasan Xanafi Xaaji ayaa daaha kaga rogay hababka jirdil iyo tacaddi ee lagula kaco maxaabiista ku xiran Madaxtooyada iyo Xerada Xalane, waxaana uu adkeeyay iney tacaddiyadaas ku jiraan fal qowmu luudh-nimo in lagula kaco maxbuuska.
“Waxyaabha Ilaahey iga badbaadiyay ee halkaan aan ku arkay waxaa ka mid ah in ninka ragga ah dabada looga tago, Subxaanallah, Maxaa dhiman markaâ€ ayuu yiri Xasan Xanafi oo la yaab muujinaya.
Xasan Xanafi ayaa ugu danbeyn lagu qasbay inuu ku hadlo waxyaabo ay Filim ka soo sameeyeen, waxaana uu sheegay in taas ay ku qasabtay inuu dil ka door biday halkii ay isagoo nool “qaniisnimoâ€ kula kici lahaayeen.
Hoos ka daawo qeybta 3aadÂ ama halkan ka degso MP4